Manao tohivakana ny fanenjehan’ny mpitandro filaminana eto an-drenivohitra sy ny manodidina ireo olon-dratsy mpanendaka sy mpivarotra rongony. 25 janvier 2021
Ankoatra izay dia jiolahy mpanendaka efa mpamerin-keloka iray, fantatra amin’ny anarana hoe Mahagaga no voasambotry ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP1 Analakely, ny zoma faha-22 janoary 2021 teo ihany rehefa avy nanendaka zokiolona mivady. Voasambotra indray i Mahagaga, lehilahy 23 taona efa fanta-daza loatra amin’ny resaka endaka sy sinto-mahery eny amin’ny faritra Analakely sy ny manodidina iny. Ny zoma faha-22 janoary 2021 teo, tokony ho tamin’ny 02 ora tolakandro no nanendaka mpivady efa nahazo taona teo Ambohijatovo ity lehilahy ity. Nosintoniny tamin’izany ny vangovango teny an-tanan’ilay ramatoa 67 taona.
Raha nahita izany ny rangahy vadiny, izay efa 73 taona dia nirotsaka an-tsehatra nitazona an’i Mahagaga saingy noho ny hery tsy mitovy dia tafaporitsaka ity olon-dratsy. Niantso vonjy izy mivady, ka Polisy avy ao amin’ny CSP1 niasa nanodidina teo no nanenjika sy nisambotra an’ilay olon-dratsy teo Andohan’Analakely. Nentina nanaovana fanadihadiana teo anivon’ny CSP1 Analakely avy hatrany ity voasambotra ary natolotra ny Fampanoavana ny sabotsy faha-23 janoary 2021 teo.
Ankoatra ireo mpanendaka tra-tehaka dia lehilahy miisa 02 koa no voasambotry ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP2 Ambohijatovo, ny talata faha 19 janoary 2021 lasa teo. Ny fifohana sy fivarotana rongony indray no antony nisamborana azy ireo. Manoloana ny ady iombonana amin’ny fifohana sy ny fivarotana zava-mahadomelina dia tsy mikely soroka hatrany ny Polisim-pirenena manatanteraka hetsika manokana entina misamborana ireo minia mandika lalàna. Nahitam-bokany izany satria ireto lehilahy miisa 02 ireto no voasambotra teny amin’ny faritra Manakambahiny. Taorian’ny fanadihadiana natao azy ireo dia natolotra ny Fampanoavana ny raharaha, ka ny iray naiditra am-ponja vonjimaika, fa ny iray kosa nahazo fahafahana vonjimaika.